के हो ‘सुगर रिलेसनशिप’को चलन ? – ramechhapkhabar.com
के हो ‘सुगर रिलेसनशिप’को चलन ?
यस्तो सम्बन्धमा रहेका युवतीलाई सुगर बेबी र पुरुषलाई सुगर ड्याडी भन्ने गरिन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता विकसित देशमा लाखौं मानिस यस्तो सम्बन्धमा बस्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धलाई वेश्यावृत्तिको संज्ञा भने दिइँदैन ।
गर्भवती महिलाले धेरै केरा खाएमा छोरा जन्मिन्छ के यो सत्य हो? स्वास्थ्य जीवनशैली
हामीले सुन्दै आएका कुराहरु जस्तै ‘खुर्सानी ओसिएमा पानी पर्छ’ । भ्यागुती चलाए छाला चिलाउँछ । गर्भवतीले टन्न केरा खाए छोरो जन्मन्छ । दुध धेरै खाएमा बच्चा गोरो जन्मिन्छ आदि । यी मध्ये केहीमा सत्यता रहेको बिज्ञहरुले समेत प्रमाणित गरेकाछन् ।
अक्स्फोर्ड बिश्वविद्यालयका बिद्वानहरुले बर्षौदेखि मानिदै आएको अन्धबिश्वासलाई तोड्ने नियतले एक समूह बनाई अध्ययन गरेका थिए र नतिजामा उनीहरुले के पाए भने अधिकांस अवस्थामा धेरै केरा खाँदा छोरा नै हुन्छ । यसको लागि उनीहरुले ७ सय ४० गर्भवती महिलाहरुलाई सहभागी गराएका थिए । सहभागीहरु मध्ये जसले धेरै क्यालोरीयुक्त खाना वा केरा खाएका थिए ।
घामले डडेको दागलाई १ हप्तामा हटाउन उप्नाउनुहोस् यी सरल घरेलु उपाय
छालालाई चिसो र शान्त बनाउन दिनमा दुई पटक चिसो पानीले नुहाउनुहोस् । यसले डढिसकेको छालाको दाग हटाउँछ।– घामले डढेर छाला राता भएको वा फुटेको ठाँउमा काँचो आलुलाई पिसेर दल्नुहोस् र नुहाउनुहोस् ।– जौको खोले हालेर नुहाँउदा पनि घामले डढेको दाग हट्छ ।
– घ्युकुमारीमा छालालाई शान्त र शितल प्रदान गर्ने तत्व हुन्छ । घ्युकुमारीको रस निकालेर केही समय फ्रिजमा राख्नुहोस् र छालामा लगाउनुहोस्।– चिसो दुधले शरिरलाई पखाल्दा पनि शरिर डढेको निको हुन्छ ।
– काँक्रोलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नुहोस् र त्यसलाई पिसेर तरल बनाउनुहोस् । यो रसलाई शरिरको प्रभावित क्षेत्रमा दल्नुहोस् घामले डढेको केही दिनमै हराउँछ।– कालो चियामा पनि एन्टिअक्सिडियन्ट तत्व हुन्छ । घामबाट डढेको छालाको सौन्दर्यलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन कालो चियाको केही थोपा लगाउनुहोस् ।